Home » Featured » Ny rakitsoratry ny haino aman-jery Bitcentral dia manampy ireo mpamorona votoaty hitantara bebe kokoa amin'ny tantara mahaliana
Ao amin'ny tontolon'ny haino aman-jery nomerika, mitombo ny filàna afa-po, ary ny fitantanana azy dia mihamahazo vahana hatrany. Mitombo avo roa heny ho an'ny mpamorona ny votoaty izay miezaka tsy amin'ny fitantarany ireo tantara mahaliana indrindra fa amin'ny fahazoana mpihaino mifanaraka amin'ny hafatra lehibe amin'ny marika ihany koa. Bitcentral dia manam-pahaizana manokana amin'ny sehatry ny haino aman-jery sy vahaolana namboarina izay manampy ny votoatin'ny horonantsary hahatratra ny lanjany farany. Raha ny marina, ny vokatra maromaro avy amin'ny orinasa dia nanaporofo fa mahomby kokoa rehefa manampy ireo mpamorona votoaty ao amin'ny indostrian'ny fampahalalam-baovao amin'ny famoronana tsy ampoizina raha tsy am-bava misy votoaty lahatsary.
Nandritra ny roa taona mahery, Bitcentral dia nanome làlana fampiasa amin'ny haino aman-jery ary vahaolana manokana ho an'ireo mpampita izay te-hanatsara ny lanjan'ny horonan-tsary. Io vahaolana orinasa vaovao News News io dia lisitry ny famokarana vaovao 1 any Etazonia, mahatratra an-tapitrisany isan'andro. Vahaolana hafa, Ny fanaraha-maso afovoany dia manome fitaovana mora ampiasaina ho an'ny fanaraha-maso ny fanaraha-maso amin'ny tompona modules amin'ny fanatanterahana ireo dingana rehetra miovaova ho playout. solika, dia Bitcentral ny Linear momba ny fanovana farany indrindra sy fanovana ny indostria.
Marobe BitcentralNy vahaolana asongadin'izy ireo dia misy:
Bitcentral ny Prism Mampandeha sehatra NRCS mora ahay mampifandray ireo mpanao gazety, mpamokatra, ary talen'ny tantara tokony holazaina. Ity sehatra ity dia ahafahan'ny fiaraha-miasa ao amin'ny efitrano fampitana vaovao mandritra ny fizotran'ny famokarana. Ary ity fiaraha-miasa ity dia ahitana ny famoahana votoaty mihoatra ny halaviran'ny mpihaino nentim-paharazana momba ny tranonkala sy ny media sosialy. Ny rafi-pandaminana mety misy ao ambadika Prism ahafahan'ny mpanjifan'ny anatiny miditra ao amin'ny efitrano fampahalalam-baovao sy amin'ny fifandraisana WAN manampy amin'ny tantara arak'izany. Prism atolotra amin'ny sehatra modular, ary ny fampiasa azy dia mora ampiasaina hatrany hamahana ireo ahiahy amin'ny fivoaran'ny gazety.
Ny fanaraha-maso afovoany dia rindrambaiko master sy feno fanaraha-maso feno sy rindrambaiko feno. Manome fitaovana fandrafetana modular izay manatontosa ireo dingana rehetra mihetsika ao anaty playout izay mampitohy ny ezaka ataon'ny mpandraharaha nefa tsy mampandefitra ny fahamoran'ny fampiasana. Ity rindrambaiko ity dia manome ny làlan-tsipika feno, ary misy ny fampidirana fifamoivoizana, fananana media na fitantanana fitahirizana, fandaharam-potoana amin'ny lisitra an-tserasera, fandaharam-potoana amin'ny fandaharana, fanontana fandaharana, fanovana / fanovana media, fanaraha-maso sy famoahana tatitra, fanodinana votoaty sindicated, ary firaketana famokarana automatique. Fototry ny asa mahomby kokoa ho an'ny mpampita izany no ampiasain'ny mpanao gazety.
Izay matihanina mpitazam-peo dia afaka mamorona renirano mahavariana sy manaitra sary. Ny dingana manaraka dia ny fitantanana ny arofanina toy ny fitakiana votoaty, ary ny orinasa rindrambaiko malaza Bitcentral afaka manampy an'io. Na ny vokatra na ny olany, ny votoatin'ny horonan-tsarimihetsika izay noforonina matihanina dia manana ny zavatra rehetra rehefa tonga ny manam-pahaizana manokana Bitcentral ary fandraisana anjara amin'ny tontolon'ny sehatra nomerika dia miroborobo sy mandroso ny sehatra.
Bitcentral fampitana injeniera fampitana orinasa Central Control ™ afa-po mpamorona votoaty Vahaolana vahaolana Core News ™ vahaolana namboarina Digital Media system transfer file solika Lalana amin'ny fangatahana master control automation Miasa amin'ny media multipath Sehatra NRCS Oasis rafitra fitantanana orinasa Prism famokarana tantara lavitra media sosialy sy ny syndication 2020-05-08